Dad ku Dhintay Weerarkii Taageerayaasha Trump ku Qaadeen Koongareeska Mareykanka.(Sawiro) AwdalMedia Awdalmedia Dad ku Dhintay Weerarkii Taageerayaasha Trump ku Qaadeen Koongareeska Mareykanka.(Sawiro)
Inta la xaqiijiyay afar qof oo isugu jira labo rag ah iyo labo haween ayaa ku dhintay rabshadahan ay xarunta Koongareeska ku galeen taageerayaasha Trump, waxaana dhaawacmay ku dhawaad 20-qof oo u badnaa ciidamo booliis ah.
Ciidamada booliiska Mareykanka ayaa ku guul dareestay inay hor istaagaan taageerayaasha Trump oo xoog ku galay dhismaha xarunta Koongareeska ee Capitol Hill ee kutaala magaalada Washington D.C, waxa ayna dadkan careesna xoog jiireen biro iyo jidgooyooyin booliiska u yaalay.
Xildhibaanada labada aqal ee Koonagreeska Mareykanka ayaa la geeyay xarun ammaan ah, muddo saacado ah kaddib ayaa dib loogu soo celiyay howlki uu shirka ka socday, kaddib marki ay booliska soo celiyeen amaanka iyo kala danbeynta.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa si kulul u camnbaareeyay weerarkan taageerayaasha Trump ku qaadeen Aqalka Koongareeska, waxa uuna ku tilmaamay kacdoon ka dhan ah dowlada iyo Dimuquraadutada Mareykanka.
Aqalka Sare iyo Aqalka Wakiillada dowlada Mareykanka ayaa si wadajir ah u ansixiyay natiijada guusha ay ka gaareen Joe Biden iyo Kama Harris, waxa ayna meesha ka saareen diidmadii laga muujiyay codadka gobollada Pennsylvania iyo Arizona.
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday ee Donald Trump ayaa mar kale ku celiyay in doorashada la musuq maasuqay, waxa uuna sheegay in uu aqbalayo in uu xilka ku wareejiyo Madaxweyne Joe Biden 20-ka bishan Janaayo.
“Inkastoo aan gebi ahaanba ka soo horjeedo natiijada doorashada, xaqiiqduna ay caddeyneyso, haddana xil wareejin ayaa dhici doonta 20-ka January,” ayuu ku yiri Qoraal uu soo saaray Madaxweyne Trump.
Madaxweyne Trump iyo kooxdiisa ayaa ku guul dareestay sheegashadoodii aheyd in doorashada lagu shubtay, waxaana ugu dambeyn labada Aqal ee dowlada Mareykanka meel mariyeen Guusha Joe Biden iyo haweeneyda kuxigeenlka u ah.
Hargaysa Oo Laga Bilaabay Iibka Ciyaartowga Oo Maanta Lagu la Kala Wareegay $1,337.2